घ्यू कुमारीको यी फाईदा थाहा पाएपछि तपाईं भन्नु हुन्छ :आहा घ्युकुमारी ! « गोर्खाली खबर डटकम
घ्यू कुमारीको यी फाईदा थाहा पाएपछि तपाईं भन्नु हुन्छ :आहा घ्युकुमारी !
एलोभेराको जुस एक हि’साबले शक्ति दिने पदार्थ हो । यसको नियमित प्रयोगले शरीरलाई दिनभर शक्ति प्रदान गर्छ र स्फूर्त राख्न मद्धत गर्छ । यसले रो प्रतिरोधी क्षमतालाई पनि बृद्धी गर्छ । एलोभेरा जुसले र’गतको कमीलाई पनि कम गर्छ । एलोभेराको ६ देखी ८ इन्च तासिएको टुक्रा, ५९७ वटा तुलसी’कोप पत्ता र ४९५ वटा नीमको पात लिएर थोरै पानीमा हालेर पिस्ने र यसलाई तातो काढाँ बनाएर पिउनाले एनीमिया सञ्चो हुन्छ ।
एक सातादेखि लगातार घटिरहेको छ सुनको मुल्य !